Ny TV App ho an'ny Apple TV dia hita any amin'ny firenena eropeana sasany | Avy amin'ny mac aho
Herintaona mahery lasa izay, Apple dia nanolotra am-pahibemaso fampiharana iray ho an'ny Apple TV amin'ny taranaka farany farany izay hiasa ho toy ny fantsona fahitalavitra mifantoka. Ity rindranasa vaovao ity, izay azo ampiana amin'ny katalaogin'ny Apple TV - tadidio fa hatramin'ny taranaka faha-4 dia manana fivarotana fangatahana azy ny Apple TV. Antsoina hoe «TV» tsotra fotsiny ity app ity hampifantoka ny atiny audiovisual rehetra azo jerena amin'ny alàlan'ny foibe fampitam-baovao Cupertino. Raha lazaina amin'ny teny hafa, amin'ny rindranasa iray dia mila manana ny fantsona fahitalavitra rehetra misy ianao, ary koa ireo serivisy fahitalavitra samihafa. mivantana toa an'i Netflix, Amazon Prime Video, HBO, sns.
Ity fampiharana ity nanome ny basy fanombohana, manokana, tany Etazonia. Andao, tsy zava-baovao amin'ny resaka fandefasana serivisy vaovao. Na izany aza, nanomboka Macrumors Mampitandrina anay izy ireo fa nesorina io "veto" io ary hiala amin'ny sisin-tany amerikana hanatratra ny firenena eropeana isan-karazany.
Araka ny nohazavaina taminay avy tamin'ny vavahady natokana ho an'ny Apple, ny fampiharana TV dia mahatratra ny Apple TV andiany fahefatra sy fahadimy amin'ny firenena toa azy Alemana, France ary UK. Izany hoe ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy izay efa afaka mankafy ny serivisiny rehetra nifanarahana tamina fampiharana iray. Raha fintinina, ny fampiharana TV dia mitady hanatsotra ny traikefan'ny mpampiasa sy hanamorana ny zava-drehetra.
Ankoatr'izay, tombony iray hafa amin'ny TV App ho an'ny Apple TV ny fananana kinova ho an'ny iPhone sy iPad. Fa maninona no mahaliana ity? Eny satria rindranasa izay mifanaraka amin'ny rahona. Ary rehefa miato ny sarimihetsika, andian-tsary, fanadihadiana, sns. amin'ny iray amin'ireo solosaina telo ireo dia afaka manomboka ny playback amin'ny hafa isika na aiza na aiza.
Avy amin'i Apple dia tsy manome hevitra momba ny fahatongavan'ilay fampiharana any amin'ny firenen-kafa izy ireo. Na izany aza, tsy mino izahay fa ela loatra ny fahatongavanao any amin'ny tsena vaovao. Ary bebe kokoa amin'ny drafitra ananan'izy ireo avy any Cupertino hilokana atiny manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Ny TV App ho an'ny Apple TV dia hita any amin'ny firenena eropeana sasany
Apple dia mividy an'i Shazam, manamafy ny tsaho tato ho ato
Apple dia manome torohevitra antsika hanatsarana ny fiainana bateria an'ny Mac